Krita 2016: enda kune zvinyorwa uye vector mifananidzo | Linux Vakapindwa muropa
Kirta, iyo inozivikanwa yemahara software yatakataura nezvayo kakawanda muiyi blog, ikozvino yatanga mushandirapamwe mutsva unoita kunge uchapa zviyeuchidzo kunhau kuti software iyi ichaunza kutenda kune sirogani «Ngatigadzirei mavara uye Vector Art Inotyisa«. Mushandirapamwe wekutsigira iwe waunoda zvakanyanya kune izvo zvinouya mune ino digital kudhirowa uye kupenda software iyo ine zvishoma yekuitira shanje kune mamwe akavharwa uye akabhadharwa mapurojekiti.
Krita ane zvishamiso zvakachengeterwa 2016, chimwe chinhu chave chakajairika mune ino software iyo ndeimwe yemapurojekiti anoremekedzwa mukati memahara software nekuda kwehunyanzvi uye kukosha kwayo. Nhanho nhanho yakachinja kubva mukati meKDE kuita chirongwa chakakura chakazvimirira cheCalligra suite uye kuti vanoda dhizaini dhizaini vanoda pamusoro pedzimwe nzira senge PhotoShop, nezvimwewo, nekuda kwekuchinjika kwayo uye maturusi epamberi payo basa.
Krita nguva ino haiti inokurumidza kupfuura Adobe PhotoShop kana kugadzira rutsigiro rwemaficha, kugadziriswa kwemabug uye kumwe kuitisa kuri nyore, zviri zvekuisa zvinangwa zvegore ra2016 zviri: kunatsiridza kugadzirisa zvinyorwa uye vector mifananidzo inotsigira. Kune izvi, chinyowani chinyorwa chishandiso chichaitwa, icho kusvika parizvino chakagovaniswa seye Calligra hofisi suite.
Izvo zvinoda vanogadzira ndezvekugadzirisa iyo nyowani chinyorwa chishandiso kubvisa zvisina basa zvinhu uye nekuwedzera nyowani dzakaomarara mabasa e gadzira maposta, enyambo, kana mitambo yemakadhi. Asi zvichave nyore kushandisa uye zvinopa zvemberi maficha ekudzora mafonti, kunyora nenzira dzakasiyana, zvitaera zvitsva, mitauro, kuwedzera zvinyorwa, nezvimwe. Uyezve pane iyo vector grafiti yekuvandudza chikamu chekutsiva ODG neiyo SVG standard.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 2016: enda kune zvinyorwa uye vector mifananidzo
Wese munhu anodzokorora kuti muLinux Gimp uye Inkscape havana chavanochiva kuAdobe kana Corel, hazvo kunyepa, ngatisazvinyengedza zvakare. KDE mune mazhinji emakomendi anotsoropodzwa zvine utsinye nevashandisi veLinux uye software yemahara kana yakavhurika sosi, nei? Kwemakumi emakore KDE yanga iri imwe yemapurojekiti akakomba andakaona kubvira Linux iripo, kupfuura zvido zveumwe neumwe, kuti ndinobheja mune ramangwana uye izvo zvakatipa zvidimbu zvikuru zvekodhi senge Amarok, Ktorrent, Krusader, K3B , iyo imwechete KDE desktop, Calligra, Kdnlive, uye zvirokwazvo zvimwe, asi kubva kuburitswa kwe KDE 4 basa rake rave risinganzwisisike, pane chero munhu anorangarira krita pamberi pe KDE 4? Nhasi ndiyo yakanakisa yandakashandisa muLinux nekure, zviri nyore kushandisa uye nekukurumidza kudzidza uye pamusoro pezvose zvakanyanya chinhu chehunyanzvi chandakaona muLinux, kwemakumi emakore ndinofanira kushandisa maPC maviri, rimwe riine Linux uye rimwe riine Windows, chaizvo nekuti MuLinux ini handina kuwana chinhu chakatsiga, chakashamisa kwazvo naKrita, tinotarisira kuti vagadziri vazhinji vanocherekedza uye vanotanga kunzwisisa kuti Linux yatove chinhu chekutamba chema geek kana programmers, zviuru uye pamwe mamirioni evashandisi ari kuchema vaviri yehunyanzvi hwekushandisa kusiya Windows zvachose, haufunge kuti inguva Usaite iko kukanganisa kumwechete kwawakaita apo Corel paakatanga kutamba muLinux, rangarira? Vazhinji vanozviramba asi Corel Linux akaridzwa naDebian apo Red Hat yaive mambo akanaka.Handisi kuzotsanangura zvakazoitika nekuti ivo vanoziva kare, asi vana vadiki vakaita sei netoyi yavo? Nhasi Corel inogona kunge iri yemahara software yekambani uye yakadhonza vamwe vazhinji nayo, asi kusakura, kushamisira uye kushaya chiono chenguva yemberi kwakaparadza mukana mukuru weLinux, nhasi ndinokuyeuchidza kuti Microsoft ndeimwe yevanopa zvikuru kodhi iyo Linux kernel ... iwe unofanirwa kudzidza kubva mukukanganisa uye kwete kudhonza uchipesana neavo vanofambira mberi. Makorokoto ku KDE!
Linux AIO Debian 8.4, ese madhiri shanduro pane imwechete ISO